म को हुँ भन्ने चिनौँ, लुगा फेर्दैमा हुलीया र वर्ण फेरिन्छ र ? सकारात्मक सोचौँ - jillakhabar.com Nepal's Digital News site
Home ब्रेकिङ न्युज म को हुँ भन्ने चिनौँ, लुगा फेर्दैमा हुलीया र वर्ण फेरिन्छ र ? सकारात्मक सोचौँ
म को हुँ भन्ने चिनौँ, लुगा फेर्दैमा हुलीया र वर्ण फेरिन्छ र ? सकारात्मक सोचौँ
on: १८ असार २०७६, बुधबार १०:२६
अहिले हामी नेपालीको सोचाई धेरै नकारात्मक तिर गैसकेको छ । राजनितीक देखी हरेक कुरा नकारात्मक सोचाईले भरिएको पाइन्छ । अहिले नेपालमा सकारात्मक कुरा भन्दा नकारात्मक कुरा व्याप्त खोजी हुन्छन् । कुनैपनि कुरामा केही न केही सकारात्मक पक्ष अवश्य हुन्छन् भन्ने हामी किन सोच्दैनौँ ?
नेपालमा बसेर अमेरिकाको ऐश आराम खोज्नु मुर्खता हो अनि हाम्रो आफ्नै अस्तित्व स्विकार गर्न नसक्नु त झन् महा मुर्खता हो । अरुले लादेको कुरामा हिँड्ने, परनिर्भर बन्ने, अरुको कुरामा चासो राख्नेले म को हुँ भन्ने चिन्नु पर्छ की पर्दैन ? हामी नेपाली हौँ यहाँ नेपाली गतिविधी चल्छ न की अरु विकसित देशको । राजनिति कै कुरा गर्दा सबै भाडाका राजनिति देखिन थालेको छ नेपालमा । होइन भने नेपाली भुगोल र अस्तित्व बेगरका राजनितिक कुरा किन आउँछ ? हिजो काँग्रेस, माओवादी, एमाले लगाएत सबै दलहरुले राज्य अनुभव गरेका छन् । अन्य नया सिर्जित पार्टीहरुपनि तिनैबाट फुटेका हुनाले व्यक्ती र प्रबृत्ती एउटै हो भन्नेमा दुइमत छैन । नयाँ लुगा फेर्दैमा हुलीया र वर्ण फेरिन्छ र ? अब त्यसो हो भने हरेक कुरामा बिरोध किन ? अरुको अस्तित्व स्विकार गर्नै नहुने ? अरुको राम्रो कुरालाई राम्रो भन्नै नहुने ? अनी आफ्नो नराम्रो स्विकार गर्न नसक्ने ? यस्तो निच सोचाइले कसरी विकास हुन्छ हँ ? खानेबेला टाउकेहरु सबै मिलेकै छन् आखिर जुध्ने त तल्ले स्तरका भुरे कार्यकर्ता न हो ? आखिर जुध्नेले पाए चै के ? सगरमाथा हाम्रै हो, बुद्ध हाम्रै हुन् लुम्बिनी पनि हाम्रै हो । विश्व ब्रम्हाण्ड नै हाम्रो हो भने अब लड्नुपर्ने के छ ? बिहारका भतुवाहरुलाई चुलोमा भान्से बनाएर तराइका हाम्रा मधेसी दाजुभाइलाई लात मार्ने खेल खेल्नलाई हामीले कहिले चिन्ने ? मेरो बा लाई दमै भन्थे उहाँले सिलाएका लुगाले मलाई विश्वभर चिनायो, काकालाई कामी भन्थे उहाँले बनाएको खुकुरीले विश्वमा जितायो, ठुलाबालाई काठे बाहुन भन्थे उहाँको पशुपतिको आशिर्वादले विश्व अडिएको छ, माइला बा लाई सार्की भन्थे उहाँले सिलाएको जुत्ताले आज म जडिल काँडा किला पार गरेको छु अब भन्नुस् म को हुँ ? सबै जात धर्म लिंग वर्णको स्विकार गर्ने नेपाल आमाको छोरो म नेपाली हुँ मलाई यत्ती थाहा छ । कालो, गोरो, नाकथेप्चे नाकचुच्चे सबै मेरो परिवार हो भन्ने हामीले कहिले बुझ्ने ? सिप अनुसार बाँडफाँड भएको कामको आधारमा विभेद गरेर अहिले मनमुटाव गर्नुको के फाइदा ?
यो लेख गञ्जागोल छ बुझ्नु जरुर नहाेला तर तात्पर्य बुझ्नु जरूर छ ।
धम्जा स्वास्थ्य चौकी बागलुङको सामाजिक परिक्षण सम्पन्न
बागलुङको बडीगाडमा मुढाले किचेर एक किशोरीको मृत्यु,